Inkampani News-Nanjing BeiLiDa Entsha Mathiriyali Indlela Engineering Co., Ltd.
Ulapha : Ikhaya>iindaba>Company News
Yibhiyozele ngokufudumeleyo impumelelo yeBeilida ngo -2013 eTshayina (Nanjing) umboniso we-arhente yokuhombisa izakhiwo !!!
Inkampani ineziphumo zonyaka zeetoni ezingama-40000 zefungi yemichiza, kwaye iifayibha zisetyenziswa kakhulu ukwenza amalaphu ebanga eliphezulu, iipakethi zangaphantsi, iimpahla zangaphantsi, iisokisi, iigloves, iribhoni kunye nezinye iimveliso.
Yibhiyozele ngokufudumeleyo impumelelo yoyilo lwendonga edongeni (eShanghai) yeforum!
Uyilo lwendonga eyenziweyo (iShanghai) ingqungquthela yeengqungquthela "uyilo kunye nophando lwesakhiwo esine-high-wall wall" ezixhaswe liziko lanamhlanje lokwakhiwa kwezakhiwo zempuma ye-China China uyilo lwezakhiwo kunye nophando lweziko., L. Umnyango odongeni kunye neengcali zefestile kunye nemagazini yezobugcisa ekwakhiweni ngempumelelo egqitywe nge-16 kaNovemba ngo-2013 kwiholo yesayensi eShanghai.
I-Beilida Yakha I-GFRC Iipaneli zoDonga lweeNqanawa ze-Nanjing yoLutsha lwaseNanjing
Iprojekthi yeZiko leeOlimpiki zoLutsha eNanjing empuma yesithili saseJianye, isiXeko saseNanjing, sijongane echibini. Olu luyilo lweprojekthi oluvela eZaha Hadid, iziko libonakala ngathi lihamba ngesikhephe, lithetha "abantu abancinci abahamba ngesikhephe". Le projekthi yeyona inzima yokuxhasa izakhiwo zeZiko leeOlimpiki zoLutsha. Le projekthi igubungela indawo eyi-52000m2, indawo yokwakha imalunga nama-480000m².
U-Beilida uphumelele "oyena mlingane ulungileyo" isihloko seMilky SOHO
Kule mihla, "Ukuncoma inkomfa yeMilky SOHO" ibiqhuba kwisiza saseBeijing Milky SOHO, inkampani yethu inethamsanqa lokuthatha inxaxheba ekwakhiweni kwale projekthi, kwaye yaphumelela isihloko esithi "liqabane elifanelekileyo". Ndinelunda kakhulu ngomsebenzi waseBeilida, ngumsebenzi wakho onzima owenze lo mmangaliso uyilo.
IBeilida Yakha "iThuba leSithathu leTangshan" iGFRC yoPhahla lwePhepha loDonga
Iprojekthi le ikwisiXeko saseTangshan, esigubungela indawo eyi-12000m2. Olu luyilo lusebuchwephesheni, isakhiwo se-dislocation stereo, enkulu ye-span canalvered balcony beam plate.
"Ukunyanzela" ubuchule bokuyila ngobuchule
Imyuziyam yohlaziyo ye-1911 inendawo yokwakha engama-22,000 ㎡. Kule projekthi, u-Belinda usebenzisa i-12,400 ㎡ yeephaneli zodonga lwendonga ezinamatye endalo ngaphezulu, i-200mm yetafile yokulingana kunye nolawulo lwe-convexity, 700㎡ yendawo enye yokubumba, kunye netekhnoloji ye-photocatalyst yomhlaba yonyango isetyenziswa kwi-GFRC yodonga lwangaphandle, eyenza i-GFRC ibe neempawu zokuzicoca zokuba intle ixesha elide.